नेपालमा अर्का दुइ बुद्ध « Lumbini-Kapilvastu Day Blog
RT @Ramkshrestha: न्याय मार्नु अन्यायीको नशा हो । उनीहरु न्याय नमारी बस्नै सक्तैनन । न्याय मार्दै न्यायकै दुहाइ दिन्छन अन्यायीहरु र त्यही…9hours ago
RT @_Buddha_Quotes: Develop potential endowed with interest, concentration, effort, and determination.9hours ago
RT @KcJivan1: न ज्ञान , न ध्यान , न धर्म (मानब सेवा) मान्छेहरुको यत्ति सुन्दर जीबन पुरै इर्श्या र अहंकारले जलेर खरानी भईरहेको छ।म पनि ब्यब…9hours ago
RT @growthhub_: Everything you want is so much closer than you realize. It’s up to you to be the shift and allow it in NOW.9hours ago
RT @MindTendencies2: You can learnalot about people when you placeaboundary and they try some sneaky shit to gain access to your energy…9hours ago
« गौतमबुद्ध अन्तै जन्मेको भन्नु भ्रम होः प्रधानमन्त्री
बौद्ध अजिमाको रूप फेरियो »
नेपालमा अर्का दुइ बुद्ध
Posted by rajshrestha2002 on June 28, 2010
‘Two more Buddha in Nepal’ – article by Mr. Basanta Maharjan, Researcher-Author-Journalist has been published in Gorkhapatra national daily of 26th June, 2010. In this article he, archaeologically, mentions two more Buddha before Gautam Buddha.
वर्तमान विश्वले बुद्ध भनेर गौतम बुद्धलाई मात्र बढी चिन्छन् । यिनैको जन्मभूमि भनेर नेपालले गौरव गर्न पाएको छ । बुद्ध व्यक्ति नभएर पद हो र यो पद धारण गर्ने उनी मात्र नभएर अरु पनि थिए । विपश्वी, शिखी, विश्वभू, क्रकुच्छन्द, कनकमुनि, कश्यप आदि तिनै मावन बुद्धहरूका नाम हुन् । हाल हामीसँग गौतम बुद्धका उपदेशहरू मात्र छन् र उनी स्वयंले आफूभन्दा अघिका बुद्धहरू र आफूपछि बुद्धको रूपमा मैत्रेय पदार्पण हुने जानकारी गराएका थिए । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक आधारमा जसरी गौतम बुद्धका सम्वन्धमा यिनी पौराणिक पात्र होइनन् भन्ने सिद्ध भएको छ त्यसरी नै क्रकुच्छन्द बुद्ध र कनकमुनि बुद्धका सम्वन्धमा पनि सिद्ध गर्न सकिने आधारहरू प्राप्त भएका छन् । संयोगकै कुरा मान्नु पर्दछ, गौतम बुद्धको जन्मस्थल जस्तै यी दुइ बुद्धको जन्मस्थल पनि वर्तमान राजनीतिक भूगोलमा नेपालअर्न्तर्गत नै पर्दछ । धार्मिक ग्रन्थहरूमा यी दुइ बुद्धका सम्वन्धमा यथेष्ट मात्रामा उल्लेख पाइन्छ तर यहाँ उपलब्ध ऐतिहासिक र पुरातात्विक तथ्यहरूमा आधारित भएर केही चर्चा गरिन्छ ।
बौद्ध वाङमयमा क्रकुच्छन्द र कनकमुनि दुवै बुद्धको राम्रो वर्णन पाइन्छ । क्रकुच्छन्द बुद्ध क्षेमावती नगरस्थित अग्निदत्त नाउँका एक ब्राम्हणको घरमा जन्मेका थिए । आमा विश्वचिनी देवीबाट जन्मेका यिनले शिरीषको वृक्षमुनि बोधिज्ञान लाभ गरेका थिए । यसरी नै त्यसपछि कनकमुनि बुद्ध शोभावती नगरमा पिता यज्ञदत्त र माता उत्तराको पुत्रको रूपमा जन्मेका थिए । बौद्ध ग्रन्थहरूमा यी दुवै बुद्धका सम्वन्धमा कालनिर्धारण एवं अन्य विवरण दिइएको भएपनि ती प्रमाणित हुनु बाकी नै छ । शोभावती र क्षेमावती दुइ नगर पनि कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा यकिन भइसकेको छैन । तर सो नगर नेपालमा नै भएको ऐतिहासिक आधार भने रहेको छ ।
गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा मौर्य सम्राट अशोक विभिन्न ठाउँको भ्रमणमा निस्केका थिए । भ्रमणको क्रममा महत्वपूण स्थलहरूमा आफ्नो शिलास्तम्भ स्तभण एवं अभिलेख स्थापना गर्दथे । सम्पूण भारतीय इतिहास अध्ययनमा सम्राट अशोकको अभिलेखलाई अकाट्य प्रमाणका रूपमा लिइन्छ । अशोकका अन्य अभिलेखहरूमा भन्दा केही थप विशेषताहरू सहितको अभिलेख लुम्बिनीस्थित अभिलेख हो र यसले नै गौतम बुद्धको जन्म नेपाल तर्राईस्थित रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी बगैंचामा भएको हो भनी प्रमाणित गरेको थियो । तर्राई क्षेत्रको कपिलवस्नु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवादेखि ७-८ कि. मि. उत्तरमा पर्ने निग्लिहवा गाउँमा पनि अभिलेखसहितको अशोक स्तम्भ रहेको छ । तर अभिलेख अनुसार यो गौतम बुद्धसँग सम्वन्धित नभएर कनकमुनि (कोनागमन) बुद्धसँग सम्वन्धित रहेको छ ।
निग्लिहवास्थित अशोक स्तम्भमा सम्राट अशोकले ब्राम्ही लिपि र पाली भाषामा अभिलेख कुँद्न लगाएका थिए । उक्त अभिलेखलाई देवनागरी लिपिमा रूपान्तरण गर्दा ‘देवानं पियेन पियदसिन लाजिन चोदसवसा (भिसि) तेन बुधस कोनाकमनस थुबे दुतियं वदिसे (वीसतिव) साभिसितेन च अतनं आग्राच महीयिते (सिलाथुबे) च उस पापिते’ हुन आएको छ । चार पंक्तिको उक्त अभिलेखमा पहिलो पंक्तिको अन्तिम अक्षर क्षयग्रष्त भए पनि ‘तेनु शब्दको आधा त अक्षरको त् र आधा न अक्षरको न् भने प्रष्ट देखिन्छ । तेस्रो पंक्तिको पहिलो शब्द पनि त्यसरी नै क्षयग्रष्त भएपनि ब्राम्ही लिपिको प्रकृतिअनुसार अनुमान गरी पढ्ने गरिएको छ । तर बुझाईमा भने केही फरक देखिएको छ । एक थरीले यसरी अर्थ्याएका छन् – ‘देवताहरूका प्यारा राजा प्रियदर्शी (अशोक) ले कनकमुनि बुद्धको जन्म स्तूपको दुइ पटक मर्मत गरी राज्याभिषेक भएको वीस वर्षछि आएर पूजा गरियो र विशाल स्तम्भ खडा गरियो । राजा अशोकको लुम्विनी यात्रा इ.पू. २५० मा भएको थियो अर्थात सो स्तम्भ पनि उही बेला स्थापना गरिएको हो ।
निग्लिहवामा बाहेक त्यसको केही पर गोटीहवा भन्ने गाउँमा पनि अर्को यस्तै अशोकस्तम्भ पाइएको छ । खण्डित अवस्थामा रहेको यो अभिलेखमा भने अभिलेख छैन अथवा अभिलेख भएको खण्ड प्राप्य छैन । यस शिलास्तम्भको वरिपरि पुरातात्विक उत्खनन् हुँदा त्यहाँ स्तुपको अवशेष भेटिएको थियो । त्यहाँ रहेको सूचना पाटी तथा अन्यत्र पनि यस स्थललाई क्रकुच्छन्द बुद्धको गृहनगर भनी चिनाइएको छ ।
बौद्ध सभ्यतामा बुद्ध शासनको मान्यता छ । यस अनुसार यहाँ बुद्ध शासन कहिल्यै रिक्त हुँदैन । नयाँ सम्यक सम्वुद्ध नआएसम्म अघिल्लो बुद्धलाई नै त्यसको शासक मानिन्छ र सम्पूण क्रियाकलाप उनैको नाममा सम्पन्न गरिन्छ । उदारहणका लागि वर्तमान बुद्धशासन गौतम बुद्धबाट भइराखेको छ । एवं रीतले गौतम बुद्धभन्दा अघि कश्यप बुद्धको शासन थियो । तर कश्यप बुद्धको बारेमा त्यत्ति धेरै कुरा थाहा पाइएको छैन । पूर्व बुद्धहरूमा पनि बौद्धहरू उत्तिकै श्रद्धा र सम्मान गर्दछन् । यसै क्रममा विभिन्न ठाउँहरूमा स्तुप वा अन्य निर्माण हुन्थ्यो भन्ने कुरा क्रकुच्छन्द र कनकमुनि बुद्धको प्रसंगबाट थाहा भयो । यति मात्र नभई पछिसम्म पनि त्यसको जीर्णोद्धार हुने कुरा मौर्यसम्राट अशोकको अभिलेखबाट ज्ञात भयो ।
चिनियाँ यात्रीद्वय फाहियानले सन् ४०९ र ह्वेन-साङले सन् ६३७ अघि बुद्धसँग सम्वन्धित स्थलहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा वर्तमान नेपालको तर्राई क्षेत्रमा पनि पुगेका थिए । लुम्बिनीलगायत थुप्रै बौद्ध स्थलहरूको खोजी कार्यमा ती चिनियाँ यात्रीहरूको व महत्वपूर्ण् काम गरेको छ । यी यात्रीहरूले क्रकुच्छन्द र कनकमुनि दुइ बुद्धसँग सम्वन्धित ठाउँको पनि वर्णन गरेका थिए । उनीहरूले त्यहाँ स्तूप र स्तम्भ पनि देखेको कुरा वर्णन गरेका छन् ।
निग्लिहवाको अशोक स्तम्भ पत्ता लगाउने तथा त्यसको अभिलेख उतार गरेर अनुवाद गराउने श्रेय डा। फुहररलाई जान्छ । यस सम्वन्धी उनले लेखेको रिपोर्टमा स्तम्भ नजिकै केही यस्ता सामग्रीहरू पनि देखेका थिए जसलाई स्तूपको भग्नावशेष भन्न सकिन्थ्यो । सामान्य उत्खनन्बाट थाहा भएअनुसार स्तूपको परिधि एक सय नौ फिट र ६ फिट उचाइ हुनु पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रयोग गरिएको इँटको नापो १६ x ११ x १३ भएको रहेको पाइयो ।
डा। फुहररले कुन स्तूप पाएका थिए र उनले भेट्टाएको इँटा पनि कुन थियो भनेर विचार गर्नु पर्छ । स्तम्भ लेख अनुसार सम्राट अशोकले त्यहाँ रहेको कनकमुनि बुद्धको स्तूपलाई त्यसको दोब्बर आकारमा अर्को नयाँ स्तूप बनाई छोपिदिएका थिए । अघिल्लो स्तूपको निर्माण मौर्य कालभन्दा निकै पहिले भएको कुरा त स्तम्भ लेखबाट नै स्पष्ट भएको छ । गौतम बुद्ध बालक छँदा एक पल्ट राजा शुद्दोधनले उनलाई स्तूप दर्शनका लागि लगिएको भनिन्छ । सो स्तूप पनि कनकमुनि बुद्धको यही स्तूप हुन सक्ने आधारको रूपमा यो स्तुप कपिलवस्तु दरवार (हाल तिरौराकोट) बाट नजिकै हुनुले पनि स्पष्ट पार्छ । तर्सथ राजकुमार सिर्द्धार्थले बोधिज्ञान प्राप्त गरेर गौतम बुद्धको रूपमा चिनिनुभन्दा अघिदेखि नै कनकमुनि बुद्धको स्तूप रहेको हुनु पर्ने हुन्छ ।
कनकमुनि बुद्ध पनि नेपालमा नै जन्मेका थिए भनी प्रमाणित गर्ने आधार रहेको निग्लिहवास्थित अशोक स्तम्भको आवश्यक संरक्षण गर्ने काममा लुम्विनी विकास कोषले गंभीर भएर ध्यान दिएको पाइँदैन । वि.सं. २०५७ सालको माघ महिनामा स्थानीय एक व्यक्तिले सो स्तम्भमा रोमन लिपिमा आफ्नो नाउँको संकेत दिन रोजेका थिए । उक्त युवकको मनसाय स्तम्भलाई हानी नै पुर्‍याउने नहुन पनि सक्छ र अन्यत्रका भित्ता वा ढुंगाभन्दा अरु रूपमा यसलाई सोच्न नसकेर पुरातात्विक सम्पदामा अनभिज्ञतावश यस्तो भएको होला । तर यस घटनाको समाचार प्रकाशित भएपछि पक्रेर केही सोधपूछ मात्र गरेर छाडिएको थियो । स्तम्भमा उक्त युवकले अक्षर कुँदनुमात्रले पनि पुरातत्वमाथि असर पर्छ भनेर फेरि पछि सो रोमन लिपिलाई मेट्ने काम भयो, जुन थप नोक्सान हो ।
क्रकुच्छन्द र कनकमुनि बुद्धसम्वन्धित स्थलहरूलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुन्न । गौतम बुद्धसँग सम्वन्धित स्थलहरू त नेपाललगायत अन्यत्र पनि पाइन्छन् तर यी दुइ बुद्धसँग सम्वन्धित स्थलहरू पनि सँगसँगै नेपालमा हुनु पुरातत्व एवं ऐतिहासिक अध्ययनमा ठूलो महत्वको कुरा त हुँदै हो, साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यसले त्यत्तिकै महत्व राख्दछ । बुद्ध भन्ने कुरा व्यक्तिको नाम नभई पदको नाम हो र बुद्धत्व प्राप्त गर्ने जो कोही यसको भागीदारी हुनसक्छन्, जुन आदर्श नभई ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि भएको वास्तविकता हो भन्ने बौद्ध दर्शन बुझाउन पनि सहायकसिद्ध हुन्छ । बौद्धमार्गीहरू गौतम बुद्ध मात्र नभई अन्य बुद्धहरूलाई पनि उत्तिकै श्रद्धा राख्दछन् । यस अर्थमा पनि क्रकुच्छन्द बुद्ध र कनकमुनि बुद्धसँग सम्वन्धित स्थलको महत्व रहेको छ । यी दुइ स्थललाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर थप अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ ।
इमेल : basantamaharjan@gmail.com
This entry was posted on June 28, 2010 at 2:40 pm	and is filed under लेख / रचना. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.